विद्यालयबाट छाडेको तीस वर्षपछि कक्षा ९ मा पढ्दै छिन् नायिका करिष्मा मानन्धर
सिंहलिला समाचार काठमाडौं । औपचारिक अध्ययनको धोको पूरा गर्न नायिका करिष्मा मानन्धर कक्षा ९ मा पढ्दै छिन् । कक्षा ७ मा पढ्दै गर्दा अभिनयमा प्रवेश गरेकी करिष्माले फिल्मी दुनियाँमा सक्रिय भएपछि औपचारिक अध्ययनलाई बिचमै छाडेकी थिइन ।
हेर्नुस्, ८ वर्षीय बालकका डरलाग्दा निला आँखा
एजेन्सी । मानिसका आँखाको रंग फरक–फरक हुन्छ । कसैको कालो, कसैको खैरो हुन्छन् । निलो आँखा भएका मानिस कम हुन्छन् । यस्तै, इथापियाका एक आठ वर्षीय बालकका निला आँखा हुनुका साथै डरलाग्दा पनि छन् । यसका पछाडि एक कारण पनि छ:
अधिकांश हवाईजहाज किन सेतो रंगका हुन्छन् ? यस्तो छ कारण
एजेन्सी । हामीले प्रायः अधिकांश हवाईजहाज सेतो रंग भएका देखेका छौं । रंगीन भएका हवाईजहाज कमै देखिन्छन् । यसको कारण के हो हेर्नुहोस् :
५३ सय वर्ष पुरानो हत्याको अनुसन्धान सुरु
इटली । उत्तरी इटलीको दुर्गम क्षेत्रमा ५ हजार ३ सय वर्ष अगाडि हत्या भएका एक व्यक्तिको विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिएको छ ।
कण्डम किन्न लाज मानेर यौनसम्पर्क गर्न प्लाष्टिकको झोला प्रयोग गरेपछि…
एजेन्सी । यौन सम्पर्क गर्नका लागि कण्डम किन्न लाज मान्दा भियतनामको राजधानी हानोईका एक जोडीलाई झन ठूलो अप्ठेरो खेप्नु परेको छ । उनीहरुले कण्डमको सट्टा प्लाष्टिक प्रयोग गरेपछि अस्पताल भर्ना हुनुपरेको हो ।
ब्लू फिल्ममा नेपालीको शोख…
सिनेमाको पर्दामा नायिका रेखा थापालाई स्वीमिङ कष्ट्यूम लगाएर नायकसँग लहसिएको देख्दा जिब्रो टोक्नेहरूलाई एउटा नेपाली जोडीलाई सर्वाङ्ग नाङ्गो अवस्थामा छ्यानमा रतिक्रीडा गरिरहेको भिडियो देख्दा कस्तो लाग्ला ?
एमालेको “सै पनि एमाले, मै पनि एमाले” चुनाव गीतले युटुबमा तहल्का पिट्दै १० लाख बढीले हेरे |
लोकगायक बद्रि पंगेनीले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ल्याएको एमालेको गीत धेरै भन्दा धेरै लोकप्रिय भएको छ यो समाचार तयार गर्दा सम्म १० लाख ९० हजारले हेरिसकेका छन्। गायकली गीतमा निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई मतदान गर्न आह्वान समेत छन ।
मिस नेपाल २०१७ को ताज निकिता चन्दकलाई
काठमाडौं : निकिता चन्दक मिस नेपाल– २०१७ भएकी छन् । शुक्रबार साँझ दरबारमार्गस्थित होटल अन्नपूर्णमा भएको ग्रान्ड फिनालेमा १८ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै चन्दकले मिस नेपालको ताज पहिरिएकी हुन्।
कथित ‘डन’ले फिल्म बनाउँदै, आरजु पुगिन कार्यक्रममा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कथित ‘डन’ रोज राणाले फिल्म बनाउन सुरू गरेका छन् । रोजले ‘पर्शुराम’ नामक फिल्म बनाउन लागेका हुन् । यो फिल्मको हालै काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम गरेर घोषणा गरिएको थियो ।